methanol carbon monoxide etanoic acid
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3OH + CO → CH3COOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH3OH (methanol) uu la falgalo CO (carbon monoxide)?
Dhacdada ka dib CH3OH (methanol) waxay la falgashaa CO (carbon monoxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3OH + CO → CH3COOH
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOH (carbon monoxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOH (ethanoic acid) alaab ahaan?
Hcl + CH3COONH4 → CH3COOH + NH4Cl
koloriin koloriin etanoic acid chloride ammonium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta HCl + CH3COONH4 . CH3COOH + NH4Cl
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COOH (ethanoic acid) iyo NH4Cl (ammonium chloride)?
Dhacdada ka dib HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa CH3COONH4 ()
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CH3COONH4, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada HCl + CH3COONH4 . CH3COOH + NH4Cl
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH3COONH4 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COONH4 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COONH4 () falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH4Cl ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH4Cl (ammonium chloride) alaab ahaan?
O2 + CH3CH2OH → CH3COOH + H2O
Oxygen etanoic acid biyaha
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta O2 + CH3CH2OH → CH3COOH + H2O
Waa maxay xaaladda falcelinta O2 (oxygen) ee ay la falgasho CH3CH2OH ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COOH (ethanoic acid) iyo H2O (biyaha)?
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa CH3CH2OH ()
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CH3CH2OH, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada O2 + CH3CH2OH → CH3COOH + H2O
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH3CH2OH ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3CH2OH ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3CH2OH () falcelin ahaan?
Sonac; Aashitada fosfooriga; Orthophosphoric acid; Haydarojiin aysiidho fosfoor ah etanoic acid Sodium dihydrogen fosfate; Aasaaska sodium fosfate; Fosfooriyada acid dihydrogen sodium cusbada; Monobasic sodium fosfate; Sodium fosfate
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3COONa + H3PO4 . CH3COOH + NaH2PO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH3COONa () waxay la falgashaa H3PO4 (Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid; Phosphoric acid hydrogen)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COOH (ethanoic acid) iyo NaH2PO4 (Sodium dihydrogen phosphate; Sodium phosphate Primary; Phosphoric acid dihydrogen sodium salt; Monobasic sodium phosphate; Sodium phosphate)?
Dhacdada ka dib CH3COONa () waxay la falgashaa H3PO4 (Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid; Phosphoric acid hydrogen)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga NaH2PO4 (Sodium dihydrogen phosphate, Primary sodium phosphate; Phosphoric acid dihydrogen sodium salt; Monobasic sodium phosphate; Sodium phosphate), oo soo muuqanaya dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3COONa + H3PO4 . CH3COOH + NaH2PO4
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOH (Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid; Phosphoric acid hydrogen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOH (ethanoic acid) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada NaH2PO4 (Sodium dihydrogen phosphate; Sodium phosphate Primary; Fosforic acid dihydrogen sodium salt, Monobasic sodium phosphate, Sodium phosphate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaH2PO4 (Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid, Phosphoric acid hydrogen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaH2PO4 (Sodium dihydrogen phosphate; Sodium phosphate Primary; Phosphoric acid dihydrogen sodium salt; Monobasic sodium phosphate; Sodium phosphate) badeecad ahaan?
H2SO4 + (CH3COO)2Ba → 2CH3COOH + BASO4
acid sulfuric Aashito Diacetic acid; Cusbada barium ee diacetic acid; Cusbada bariiska bariiska; Barium acetate etanoic acid barium sulfate
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + (CH3COO)2Ba → 2CH3COOH + BASO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa (CH3COO) 2Ba (Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COOH (ethanoic acid) iyo BaSO4 (barium sulfate)?
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa (CH3COO) 2Ba (Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda (CH3COO) 2Ba (Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate), oo meesha ka baxaysa
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + (CH3COO)2Ba → 2CH3COOH + BASO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta (CH3COO)2Ba (Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee (CH3COO)2Ba (Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (CH3COO)2Ba (Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CH3COOH (Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOH (ethanoic acid) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaSO4 (Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaSO4 (barium sulfate) badeecad ahaan?